Soomaalida Yemen Oo Xaalad Adag Soo Wajahday – Goobjoog News
Guddiga ku howlan diiwaan geilinta dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Yemen islamarkaan doonaya in dalkooda ay kusoo laabtaan ayaa sheegay in xaalad aan fiicnayn ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed ee ku nool halkaasi.
Cabdiqaadir Cali oo xubin ka ah guddigaan ayaa sheegay in dad badan ay diiwaangeliyeen balse dowladda aysan weli dadkaasi u dirin Maraakiib lagu soo qaado.
Xaaladda nolosha ee dadkaasi ayaa aad u adag dadka qaarna waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay dagaallada ka soconaya wadanka Yemen.
“Xaaladda dadka aad ayeey u liidataa ma haystaan wax ay cunaan ama ay cabaan, habeen iyo maalin dadka weyn inoo imaanayaa si aynu ugu sheegnowax rajo ah ama maraakiib dowladdu soo dirtay, laakiinse hadda ma jiraan wax ay dowladda halkaan usoo dirtay” ayuu yir Cabdiqaadir Cali.
Sidoo kale mas’uulkaan ayaa inoo sheegay in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dhaawacyo qaba, islamarkaana aan haysan meelo lagu daweeyo, xilligaan aan jirin wado ugu haboon oo loogu soo qaadi karo dalka.
Yemen waxaa ka soconaya dagaallo u dhaxeeya kooxda Xuutiyiinta iyo isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga, iyaga oo doonaya in ay difaacaan dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen.
Inta dagaalladaan ay socdeen waxa ay waxyeelo kasoo gaartay dad badan oo Soomaali ay ku jiraan, waxaana illaa io haatan aan jirin gurmad rasmi ah oo dadkani ay heleen.
Balaqan qaadka dowladda ee Qaxootiga Yemen
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay in maraakiib ay u direyso Yemen si ay usoo qaadaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhiban dalka Yemen, mana jirto illaa iyo haatan wax markab ah oo dowladda ay dirtay.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa wareysi uu siiyay Goobjoog News, waxa uu ku sheegay in Markab ay dowladda dirtay ku xiran yahay Yemen, Laba Markab kalena ay halkaasi u dirayaan, hase ahaatee weli ma muuqato wax markab ah oo dowladda Federaalka halkaasi u dirtay.
Madaxweyne Gaas oo booqasho deg deg ah ku tagay Boosaaso
Garoowe: Rag hubeysan oo la wareegay xarunta Telefishinka Puntland
Lnwysd teavof Cialis non prescription best place to buy cialis online reviews
Ysuzmx rajcip Cialis price generic cialis cost
Ubcnfp bcmgie online viagra purchase cialis for sale
Flcsgk dzgktg Order viagra usa generic for cialis
Culimada Gaalkacyo Oo Baaq u Diray Beello Isku Haya Bariga Gobolka Mudug
Hffqnv rxgycd pharmacy online Pmocw...
best russian dating sites forum [url=http://lqj5scy7.netlib....